Maxay ka dhigan tahay Iscasilaadda wasiirka Difaaca iyo taliyaha Ciidamada xoogga? | Ilwareed Online
Home WARKA DALKA Maxay ka dhigan tahay Iscasilaadda wasiirka Difaaca iyo taliyaha Ciidamada xoogga?
Maxay ka dhigan tahay Iscasilaadda wasiirka Difaaca iyo taliyaha Ciidamada xoogga?
Ciidammada Xoogga dalka
Wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada Soomaaliya oo iscasilay
Mukhtaar Roobow oo gaaray magaalada Xudur
Ciidammada Soomaaliya oo kaabiga u saaraan Tiyeeglow
Saldhigyada ciidammada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee Kulbiyow oo la weerraray
Previous articleWasiir Oomaar “Hay’adaha UN-ka carqalad ayay ku noqdeen Garoonka Diyaaradaha”
Next articleTaliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed S/Guuto. Saacid oo gaadiid Ku wareejiyey Ciidamada Booliska Hirshabeele